Abakhiqizi be-Canvas Tote Bag, abahlinzeki - China Canvas Tote Bag Factory
Iningi labantu liyazi ukuthi ukotini ungenye yezinto ezindala kakhulu emashumini eminyaka. Ngakho-ke, ngokubheka isici sokuvikelwa kwemvelo kukotini, ukotini uyinto enhle kakhulu yokwenza izikhwama uma kuqhathaniswa nepulasitiki.
Izikhwama ze-Canvas zingahlukaniswa zibe yizinhlobo ezintathu ngokuya ngempahla, ukotini we-polyester, ukotini omsulwa, ne-polyester emsulwa; Izikhwama ze-canvas zihlukaniswe ngehlombe elilodwa, ihlombe eliphindwe kabili, nesikhwama esikhishwe ngendlela yangemuva.
Isikhwama Sokuthenga se-Canvas
Isikhwama se-Canvas tote senziwe ngokotini. Ngenxa yempahla yayo enobungani bemvelo, ngakho-ke izindleko zamasaka we-canvas tote zibiza kakhulu kunezindwangu ezingalukiwe. Siyakujabulela ukuvikela umhlaba ngezikhwama zokuthenga ezisebenzisekayo, ungathi cha ezikhwameni zephepha noma zepulasitiki futhi uvikele imvelo yomhlaba okuyikhaya laso sonke isintu.
Okwenziwe esikhwameni sikakotini kukotini ophilayo, futhi awekho amakhemikhali okucubungula, ama-ferlilizers, noma ama-pesticides kukotini ojwayelekile. Ungayethemba ukuthi iyaboliseka ngokubola ngakho-ke ngeke ihlale endaweni yokulahla udoti.